Welcome to Aayaha Nolosha » NIN DIYAARAD UU RAACI LAHAA KA SOO DAAHAY OO BURSADAY DIYAARADDII
NIN DIYAARAD UU RAACI LAHAA KA SOO DAAHAY OO BURSADAY DIYAARADDII
September 28, 2018 - Waxaa Qorey : Caaqil Dalmar -
Nin 23 sano jir ah oo ka soo daahay diyaarad uu ku qornaa in uu raaco ayaa waxa uu ninkan garoonka soo galay xilli ay diyaaradda isku diyaarineysay in ay duusho.
Ninkan oo lagu magacaabo Patrick Kehoe ayaa xoog ku soo galay garoonka caalamiga ah ee magaalada Dublin, xilli diyaaraddii uu raaci lahaa albaabada loo xiray iskuna diyaarinaysay in hawada gasho, waxa uuna ninkan eryaday diyaaradda oo ku socota dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan.
Ciidamo ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Dublin ayaa eryaday ninkan daba orday diyaaradii uu raaci lahaa, waxaana gudaha garoonka ninkan ku ceersaday booliis wata labo ka mid ah gaadiidkooda gaarka ah kuwaa oo markii dambe qabtay.
Ninkan dhalinyarada ah oo u safrayay dalka Holand ayaa markii uu gudaha garoonka soo galay ku qeylinayay jooji diyaaradda iyo ereyo kale, hasa ahaatee ninkan ayaa ku fashilmay in uu diyaaradda raaco waxaana taa badalkeeda la dhigay xabsi.
Afhayeen u hadlay maamulka garoonka diyaaradaha ee magaalada Dublin ayaa sheegay in nin rakaab ahaa oo ka soo daahay diyaaradii uu ku qornaa damcay in diyaaradda dabo ordo sidaasna ku raaco, waxa uu xusay afhayeenka in ninkaasi booliiska markii dambe xireen.
Dhacdadan maanta ka dhacday garoonka diyaaradaha magaalada Dublin ee dalka Irland ayaa noqotay mid si weyn u hadal hayaan warbaahinta, waxaana ninkan dhalinyarada la sheegay in uu ka xumaa in safarka ka habsaamo.